Qirashada Beesha Caalamka Ee Inay Ku Fashilantay Wax Ka Qabashada Xasuuqii Ruwanda – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Qirashada Beesha Caalamka Ee Inay Ku Fashilantay Wax Ka Qabashada Xasuuqii Ruwanda
Labaatan sano kaddib xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda, oo toddobaadkii hore si weyn loo xusay, waxa haatan soo ifbaxaya astaan muujinaysa in madaxda caalamka ay garwaaqsanayaan in ay ku guuldaraysteen mas'uuliyaddii ka saarnayd dadka reer Rwanda xilligii uu xasuuqaasi dhacayay sanadkii 1994-kii.
Xuska sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii uu dhacay xasuuqaasi ayaa waxa ka soo qayb galay hoggaamiyeyaal badan oo ka socda daafaha caalamka.
Sidoo kale waxa munaasabaddaasi joogay mas'uuliyiin hore oo caalamka magac ku leh, sida Tony Blair oo ahaan jiray ra'iisalwasaaraha Ingiriiska.
Mr. Blair ayaa sheegay in in kasta oo Rwanda ay soo martay dhacdo tii ugu xumayd taariikhda caalamka, haddana ay tahay wax lagu farxo horumarka ay gaartay.
Mr Blair ayaa qiray in hoggaamiyeyaasha reer galbeedka ay dareensan yihiin inay ka gaabiyeen ka hortagga xasuuqaasi oo sida uu sheegay ahaa mid laga hortagi karayay.
Hadalka Blair ayaa imanaya maalmo kaddib markii Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon, oo ka hadlayay munaasabad baroordiiq loogu sameynayay dadkii ku dhintay xasuuqii ka dhacay Rwana, uu sheegay in Qaramada Midoobey ay ceeb ku tahay in ciidamadeeda nabad ilaalinta ay ku guuldareystaan in ay ka hortagaan xasuuqaasi.